अदुवाको रस महमा मिसाएर खाएमा पनि खोकी टाढा भाग्छ । तपाईलाई रुघाखोकीले सताएको छ भने राती सुत्नभन्दा अगाडि दुध वा चियामा अदुवा उमालेर पिउनुहोस् । तर्पाको स्वास्थ्यमा छिटै सुधार हुन्छ । अलैंचीलाई चियामा उमालेर पिउनाले रुघाखोकी ठीक हुन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
जुत्ता राख्ने ¥याक कुन दिशामा फर्काउनु हुँदैन ? यसो भन्छ, ज्योतिषशास्त्र !!